DAAWEYNTA LIFAAQYADA LA'AAN
maamuuska waxtar u leh oo aadan u baahan tahay in ay isticmaalaan nidaamka dayada kaabayaal for barakac ilkaha.
Diiwaangeli aagga hayaa caafimaad oo uu bilaabo barnaamij tababar la Dabcan video our,.
Setup oo lacag la'aan ah waji lacala dhameysteen daaweyn dhameystir ama haddii khasaare ama jab of maaskarada.
photos of raadkoodii wuxuu kuu diri karaa in our lambarka telefoonka mar walba la heli karo iyo aad u hesho jawaabaha su'aalaha oo dhan oo ku saabsan tayada la mid ah, kaas oo lagu xakamayn doonaa ilaaliye xalinta sare ee tooska ah; halka bukaanku weli waa daraasaddan.
CAAWIMAAD HIRGELINTA iyo wax soo saarka POST
con Setup video, quote, taalo mar walba lacag la'aan ah. Waxa kale oo aanu diyaar u ah iska hor imaad kasta inta lagu jiro horumarka kiiska.
QALABKA EE Hall Suuq Imaansho
Riix halkan si aad weydiina qoraalka free keenaa miiska ama dhulka, macluumaad videos iyo qoraalo loogu talogalay bukaanka aad.
DAAWEYN DHEERAAD AH’ Sax ah oo degdeg ah LA'AAN Maaskaro LIFAAQA WITH aalladda hufan
Biomechanics hirgeliyey iyadoo double of safan DHEERAAD UP iyo UP ay iftiinka iyo ciidamada joogto ah tallaabo iyo cadaadiska dhibcood kasta gudbiyaan (DIVOT) Qoyska’ sameeyey by shirkadda si loo yareeyo criticality ee safan maaskaro Mono oo dhan. Iyada oo extrusions iyo meerto aan lifaaqa. Oo waji more macaan oo nadiif ah iyadoo waafaqsan ka fiican bukaan socodka, u technology "Dhoola caddee Glass" mahad.
Hayaa Area Dhakhaatiirta
Ku qor Halkan
Reserved Area Wakiilada
© copyright 2016 safan Dhoola caddee
In si ay u bixiyaan adeegyada ugu wanaagsan ee suurtogalka site kani waxa uu isticmaalaa cookies. Continue daalacanaya goobta awood isticmaalka cookies.waan aqbalayaa Faahfaahin intaas ka badan
- The alaabooyinka ku xusan iyo logos ay ka soo jeedaan aan la leedahay guryaha Paul Protani doonistii shirkadaha la xiriira. All logos iyo alaabooyinka waxaa ka mid ah milkiilayaasha ay oo lagu xusay fududeeyo search for alaabta socon. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah sida ay D.Lgs.196 / 2003 -